Semalt Islamabad Expert: Ahoana no hanombohana blôgy WordPress ao anatin'ny folo minitra
Miova haingana ny tontolo iainantsika ankehitriny, ary izao no fotoana hanohananao ny orinasanao amin'ny tranonkala na bilaogy WordPress. Na dia misy maro aza ny rafitra fitantanana ny votoatiny, WordPress dia ampiasain'ny olona 95% noho ny drafitra maoderina sy ny fampivoarana. Manao bilaogy miditra amin'ny fotoana feno aho, ary manao toy izany koa ny olona samihafa. Tsy afaka mandefa vola an-tserasera ianao raha tsy misy bilaogy manokana, ary tsy tsiambaratelo ny WordPress no sehatra tsara indrindra hananganana bilaogy iray.
Eto Michael Brown, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , dia hampianatra anao ny fomba hanombohana bilaogy WordPress ao anatin'ny folo minitra.
Dingana # 1: Mamaha ny hevitra:
Raha te hampivelatra sy mitazona bilaogy WordPress ianao, dia tokony hanana hevitra tsara ianao ary tsy tokony hanana hevitra fohy. Soa ihany fa misy bilaogy maromaro afaka mahazo aingam-panahy. Ary misy blôgy samihafa mety tsy ho liana amin'izany. Izany no antony tokony hitiavanao ny lohahevitra soratanao ary tsy tokony hanomboka mitoraka bilaogy raha tsy te-hanoratra zavatra isan'andro ianao.
Dingana # 2: Lazao ny bilaogy ary mifidiana amin'ny tranokalan'ny tranonkala:
Maro ny olona misafidy ny wordpress.com noho ny asany malalaka. Raha te hanana sehatra manokana ianao dia tokony hifidy azy avy amin'ny GoDaddy, BlueHost na tranonkala hafa mitovy. Aza misaina intsony ary manonona avy hatrany ny blôginao. Amin'izay fotoana izay ihany, tokony hifidy tranonkala fampiantranoana ianao raha fantatrao ny lazany. Amin'ny ankapobeny, ny raki-daza wit dot com dia mandoa mpiserasera hatramin'ny $ 15 isan-taona, ary ny serivisy fampiantranoana dia miankina amin'ny mpandraharaha mpanome anao. Amin'ny ankapobeny, ny drafitra fampiantranoana isan-taona dia $ 40 hatramin'ny $ 5000. Raha tsy manana tranonkala sy mpampiasa tranonkala ianao, dia tsy afaka manangana blôgy ianao.
Ireto misy hevitra manan-danja tokony hotadidinao:
Fidio ny anaran'ny sehatra .com
Manorata teny roa na telo ho an'ny anaran'ny blôginao
Ampiasao ny teny fototra fototra hanehoana ny blôginao amin'ny fomba tsara kokoa
Aza mifidy tranonkala maimaimpoana maimaim-poana satria hanome tolotra voafaritra tsara, karazana, ary safidy
Dingana # 3: Mametraka WordPress ary Fidio ny Theme:
Ny fahatelo sy iray amin'ireo dingana lehibe indrindra dia ny fametrahana WordPress ao amin'ny cPanel. Ary farany, mila mifidy ny foto-kevitra ianao ary alao avy hatrany izany. Ao amin'ny tontolo bilaogy, ny design WordPress dia fantatra ho lohahevitra. Misy lohahevitra an-jatony maro an'arivony saingy ireo olona tia azy ireo dia tena tiany sy nofantenina. Indray mandeha ny lohahevitra dia nofidina, afaka manova izany ianao amin'ny fotoana rehetra. Midira ao amin'ny dashboard WordPress ary midira amin'ny faritra yourdomain.com/wp-admin. Eto no ahafahanao manova ny fijerin'ny blôginao ary ampiasao amim-pitandremana ireo fanomezan-dalana anao. Raha tsy mahita lohahevitra mety ianao, manoro hevitra anao aho mba hisafidy ny Theme Thrive, StudioPress, ElegantTheme na ThemeForest, izay ny lohahevitra WordPress tsara indrindra hatramin'izao.
Dingana # 4: Manoritsoritra sy manatsara ny bilaogy WordPress
Raha vao nofafidy ilay lohahevitra, dia mila mamolavola sy manatsara ny WordPress blog ianao. Raha ny sehatra no fototry ny tranonkalanao, ny fampifanarahana sy ny fandefasana tsara dia tsara hanatsara ny laharan'ny blôginao amin'ny valin'ny fikarohana. Azonao atao, ohatra, ny mampiasa ny WordPress plugins mba hampidirana ireo endrika fifandraisana, forums, pikantsary, sary, ary horonan-tsary ao amin'ny blôginao. Mandehana any amin'ny faritra manokana ary tsindrio ny bokotra Custom. Azonao atao ny manampy ny anaran'ny blôginao sy ny teny filamatrao. Toy izany koa, ny fanatsarana ny fikarohana dia zava-dehibe ho an'ny WordPress blogo. SEO no fomban'ny fanatsarana ny bilaogy ho hita ao amin'ny valin'ny fikarohana. Ampidiro ny SEO amin'ny Yoast plugin mba hampidirana famaritana, meta tags, meta lohateny, ary teny manan-danja ao amin'ny hafatrao.
Dingana # 5: Soraty ny lahatsoratra voalohany amin'ny bilaogy
Fotoana izao hanoratana ny tantaram-piainana voalohany ary hanao izany. Wordpress dia mampiasa ny mpampiasa intuitive, izay mitovitovy amin'ny fitaovana fanodinan-teny. Azonao atao ny mamorona pejy vaovao avy amin'ny faritra Admin ao amin'ny WordPress. Tsy maintsy tsindrio fotsiny ny bokotra Post ao amin'ny sidebar havia, ary araho amin'ny bokotra Add New button. Wordpress dia hamorona automatique permissions amin'ny tantara rehetra mifototra amin'ny teny fanalahidy sy ny lohateninao / lohateny.
Eo anoloanao ny bokotra Publie, ataovy azo antoka fa ny tantaranao dia manana ireto toetra manaraka ireto:
Voalaza amin'ny alàlan'ny tononkiran-dahatsoratr'izany
Ny votoaty dia tsy manan-tsahala ary afaka amin'ny plagiarism
Nampiasa lohatenin-dahatsoratra ianao tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra
Azonao ampiasaina ihany koa ny lisitra, ny bala, ary ny lisitra fanamarinana mba hahatonga ny lahatsoratranao ho tsara tarehy
Ampidiro sary sy lahatsary manan-danja
Amin'ny maha-fanamarihana farany antsika dia tianay ny hilaza aminareo fa rehefa navoaka ny lahatsoratra dia tokony hizara azy amin'ny Facebook, Twitter, ary tranonkala hafa ho an'ny tambajotra sosialy hahazoana mpamaky bebe kokoa Source .